Somali - SOOMAALI - RentinginSeattle | seattle.gov
Tenant Animation - Renting in Seattle
Landlord Animation - Renting in Seattle
Qaab cusub oo lagu heli karo macluumaadka iyo adeegyada guryaha kirada ah ee Seattle!
Maxay tahay Renting in Seattle Resource Center?
Magaalada Seattle ayaa hadda samaysatay webseet iyo taleefan lambar si looga caawiyo mulkiilayaasha guryaha iyo dadka guryaha kiraysanaaya labadaba inay helaan macluumaadka kusaabsan kiraysiga guryaha Seattle.
Waa maxay macluumaadka laheli karo?
Webseetku wuxuu macluumaad kabixinayaa xaquuqaha iyo waajibaadka dadka kiraystayaasha ah iyo mulkiilayaasha guryaha inta lagu jiro shaqada kiraynta laga bilaabo soogalida guriga illaa kabixida guriga. Waxay sidoo kale sharaxaad kabixinaysaa shuruucda Magaalada, xeerarka udagsan guriyaynta, iyo waxa aad samaynayso hadii adigga ama qof aad taqaano lakulmo takoor dhanka guriyaha ah. Sidoo kale waad nasoo wici kartaa hadaad doonayso inaad qof lahadasho, lagu caawiyo, ama aad cabasho kagudbiso gurigaaga.
Adeegyada turjumaanka ayaa markasta diyaar ah.
Bogaan webseetka waxaa kujira dukumiintiyo turjuman kuwaasoo macluumaad muhiim ah kabaxsha shuruucda kirada, difaacyada dadka kiraystayaasha ah, sharciyada guriyaynta cadaalada ah, adeegyada, iyo adeegyada kale ee muhiimka ah.
Magalaada Seattle waxay aaminsantahay iskudhafnaanta iyo sinaanta dadka. Dadka soogalootiga ah iyo qaxootiyaasha waa lagusoo dhawaynayaa magaaladaan.
Shaqaalaha magaaladu dadka mawaydiiyaan sharcigooda muwaadinimada waxayna ushaqeeyaan dhamaan dadka dagan magaalada ayadoon loofiirnayn inay soogalooti yihiin iyo inkale.
Si lagaaga caawiyo helitaanka guri raqiis ah, caawimaadna lagaasiiyo usoo guurida guri cusub, iyo adeegyada kale ee bulshadaba wac 2-1-1 ama 1 (877)-211-9274 ama booqo bogga win211.org.
Dukumintiyada Faa'iidada leh